Rose of Sharon: ရပ်ကွက်တိုင်းကထိုမိန်းမ
Posted by rose of sharon at 8:12 PM
Ma Ma I also meet like that lady. I feel very fed up :(
rose of sharon September 30, 2011 at 9:35 PM
Anonymous-- I understand how you'd feel :( , thanks for your comment.
တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် တမင်တကာ တိုက်ဆိုင်မှုသာဖြစ်ပါကြောင်း..ဟဲဟဲ...
ပွင့်လင်းတယ်ပြောပြီး အကုန်ထုတ်ကြွားတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးလွန်းလို့။ ပြီးတော့ ဆရာကြီးလုပ်တတ်တဲ့သူတွေက သူငယ်ချင်း မမြဲဘူး။ ခဏပေါင်းပြီး ပြဿနာဖြစ်လို့ ကွဲသွားတာတွေချည်းပဲ။ တလောက တွေ့တုန်းက ဘယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ဘယ်လိုခင်ပြီး သွားလည်တာတွေ လျှောက်ကြွားလာပြောပြပြီး နောက်တခေါက် ထပ်တွေ့တော့ကျ ခွာပြဲနေတဲ့အကြောင်း ကြားရတော့တာပဲ။ တို့တော့ အဲလိုလူတွေကို ကြာကြာတခါ ကြုံမှ တွေ့တယ်။ တမင်တကာ သွားမတွေ့ဘူး... စိတ်ရောကိုယ်ပါ မပေါင်းဘူး။
ချစ်ကြည်အေး September 30, 2011 at 9:53 PM
ဟင်...နာနဲ့ လာတူနေသလိုလိုပဲ........အဟိ :P
စိတ်တွေ လျှော့ပါ ရိုစ့်လေးရယ် သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူပေါ့၊ သွားပါလိမ့်မယ်....
ပုံ / ထိုမိန်းမကြီးးးး
မမရေ.. ဖတ်ပြီးမောသွားပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို တွေ့ ဖူးပါတယ်။ ကြုံခဲ့ဖူးရင်လည်း စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ ။ သူနဲ့ ဆက်ဆံဖူးတဲ့ သူတွေလည်း သူ့ အကြောင်းမသိသေးရင်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသွားပါလိမ့်မယ်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! October 1, 2011 at 12:17 AM
ဟုတ်တယ်မမ အဲလိုအဲလိုပဲ :):)
blackroze October 1, 2011 at 1:35 AM
မိုးငွေ့...... October 1, 2011 at 9:30 AM
ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာမှာတွေ့ဖူးတယ် အဲလိုမိန်းမမျိုး...။
ဟင်... ကြောက်စရာကြီးနော်.....အဲ့လိုလူမျိုးများ ဘယ်တော့မှ စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေရမယ်မထင်ဘူး.... :(
kiki October 1, 2011 at 11:44 AM
ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲရှိတယ်..
ဒန်တန်တန်.. ( လွှမ်းမိုး သီချင်းလေး တရပ်ကွက်လုံးကြားအောင် အကျယ်ကြီး အော်ဆို ပေး လိုက် သည် ..) .
ရှလွတ် လေး ဂလို ရေးပုံ ထောက်ရင်..အင်း... တထုထု တော့ တထုထု ပဲ ၊
ဖွလိုက် အုံး မှ..း))
ဖွ ကိ ..
SHWE ZIN U October 1, 2011 at 1:27 PM
ဟားဟားးးးးး ဘလောဂ် ရွာ ထိပ် က ရွှေစင်ဦး တော့ ဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 1, 2011 at 1:45 PM
အစ်မပြောသလိုပါဘဲ သူကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ကြံလီဆည်ပြီးပြောနေပေမဲ့ ကိုယ်စိတ်တွင်းမှာတော့ မနာလိုမှုတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ဘာဘဲပြောပြော ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ အဲဒီလိုလူတွေလည်း တစ်ဦးတစ်လေ ရှိကို ရှိနေတတ်ပါတယ်။
sosegado October 1, 2011 at 7:35 PM
တစ်ခါတစ်လေ အိမ်ကိုလည်း အလည်လာတတ်သည်
rose of sharon October 2, 2011 at 11:24 AM
စူးနွယ်လေး၊ မချစ်၊ညီမလေးခိုင်၊ညီမလေးအိမ်ဂျယ်လ်၊blackroze၊မိုးငွေ့၊သန့်၊ဖွကိ၊မရွှေစင်၊ချော၊ Sosegado......ကော်မန့်လေးတွေအတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်... နောက်ဆုံးစာကြောင်းထဲကအတိုင်း (မည်သူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ပါ)... ပတ်ဝန်းကျင်မှ မြင်တွေ့ဘူးခဲ့သမျှ မကောင်းဘူးထင်တဲ့ စရိုက်တစ်ချို့ကို စုစည်းပြီးရေးလိုက်တာပါ
mstint October 2, 2011 at 9:32 PM
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေနဲ့အတူ စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြတယ် Rose ရေ။
မြသွေးနီ October 3, 2011 at 2:19 PM
တစ်ခါတစ်ခါ အဲ့ဒီလို လူမျိုးနဲ့ ကိုယ်ပေါင်း စိတ်ခွာနေရတဲ့အချိန်မျိုးဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် စိတ်ပျက်မိတယ်။
jasmine(တောင်ကြီး) October 3, 2011 at 2:26 PM
ရပ်ကွက်တိုင်းက ထိုမိန်းမဆိုမှတော့ ဒီနားဟိုနားလည်း ရှိတာပေါ့ သူငယ်ချင်းလေးရယ်..။ မတွေ့ချင်ဘူးဆိုလေ၊ တွေ့တတ်လေ လား လို့တောင် တွေးဖြစ်တယ် :D
အော်..ဒီလိုမိန်းမမျိုးကြီးကိုမြင်ဖူး၊တွေ့ဖူးပါတယ်၊ မိန်းမ၊ခလေးရှိတဲ့ယောင်္ကျားကို အတင်းဖမ်း၊ ကလေး၂ယောက်ရအောင်ယူပြီး သူကပဲမယားကြီးလိုလိုဘာလိုလိုလုပ်၊ ကလေးစရိတ်တောင်းထိုင်စားပြီးအထက်ကရေးထားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးလုပ်တယ်၊ ကျန်းမာနေတာကလွဲလို့... ကလေးကျောင်းအကြောင်းပြပြီးစလုံးမှာနေ ဗီရမ်နမ်နဲ့မလေးကိုလည်ပတ်ပြီး ခုတော့ အော်စီရောက်နေလေရဲ့...အော်..လူ့ဘ၀...